Wargeys caan ah oo qoray in Kenya uu dhaawac culus kasoo gaaray go'aanka DF - Caasimada Online
Home Warar Wargeys caan ah oo qoray in Kenya uu dhaawac culus kasoo gaaray...
Wargeys caan ah oo qoray in Kenya uu dhaawac culus kasoo gaaray go’aanka DF
Nairobi (Caasimada Online) – Mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan Kenya ayaa kashifay xaddiga khasaaraha ay la kulmeen ganacsatada khaadleyda tan iyo markii ay dowladda Soomaaliya xayiraad kusoo rogtay sida lagu cadeeyo xogo cusub oo la helay.
Daily Nation ayaa soo bandhigay tirada lacagaha ay qasaareen khaadleyda oo lagu sheegay 24 kun oo Doolar, waana xigasho ay ka heleen ganacsatada iyo beeraleyda kuwaas oo magacooda la qariyay.
Khaadleyda Kenya ayaa suuqa ugu weyn ku lahaa Soomaaliya, waxeyna usoo dhoofin jireen in ka badan 10 tan, waxeyna xayiraadda ay Dowladda Soomaaliya soo rogtay keentay cadaadis badan.
Sida ay fahamsan yahiin warbaahinta Kenya, Soomaaliya oo ka faa’iideysaneysa xanuunka safmareenka ah ee Coronavirus ayaa xayiraad ku sameysay maandooriyaha khaadka, waxaana sidoo kale jirta xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxeysa labada dale.
William Ruto ayaa dhawaan dowladda Soomaaliya ku eedeeyay iney xanibaadda khaadka ay dowladda Soomaaliya kaga dan leeyahiin iney cadaadis dhanka kiiska badda ku saaraan, wuxuuna ganacsatada khaadka ku booriyay iney ka fakaraan wax kale oo ay abuurtaan.
Dhinaca kale Peter Munya oo ah wasiirka Beeraha ayaa ka hor yimid hadalka madaxweyne ku xigeenka dowladda, wuxuuna kalsooni ku qabaa in madaxweynaha uu xal keeni doono.
Si kastaba xiisadda labada wadan ayaa lala sugi doonaa marka ay Soomaaliya ka baxdo marxaladda kala guurka ah, waxeyna dowladda Kenya isha ku heysaa hogaanka ay Soomaaliya soo dooran doonto iney kala heshiiyaan arintaan daba dheeraatay.